Rahoviana ianao no afaka manao firaisana aorian'ny fiterahana?
Ny fandikana toy izany, toy ny fiterahana, dia tsy mahazatra. Isan-taona dia miha-be kokoa ny vehivavy manjo azy ireo. Olona maro no mahatsapa mafy izany adin-tsaina izany ary manandrana amin'ny heriny rehetra mba ho bevohoka indray haingana araka izay azo atao mba hahazoana ny zanany efa nandrasana hatry ny ela. Na izany aza, amin'ny tranga toy izany, tsy misy haingana.
Fanontaniana mitovy amin'izany no nanontanian'ny reny tsy nahomby. Na dia eo aza ny fanaintainana (na ara-batana na ara-tsaina), izay niainany nandritra ny fialam-boly, dia vonona indray izy ireo hanandrana hitoe-jaza.
Noho ny fisian'ny fanadiovana amin'ny ankamaroany, ny tranon-jaza, raha ny tokony ho izy, dia tena manjavozavo tokoa aorian'izany fanodikodinana izany . Ankoatra izany, vantany vao vita ny fanitsakitsahana, ny vehivavy dia mitazona tsiranoka, izay manelingelina ny fiainana ara-dalàna ihany koa. Noho izany, raha ny marina, ny habetsahanao azonao anaovana firaisana aorian'ny fisedrana dia tena sarotra.
Ireo mpitsabo, amin'ity fotoana ity dia tadidio ity hevitra ity: Aza miditra amin'ny firaisana ara-nofo alohan'ny fotoana izay nahitana vehivavy iray isam-bolana. Noho izany, tsy maintsy miandry 30-35 andro ireo mpivady ireo.
Inona no hodinihina rehefa manao firaisana aorian'ny fiterahana?
Vehivavy vitsivitsy, mahafantatra fa tsy afaka manao firaisana ianao aorian'ny fiterahana, tsy mieritreritra fa aorian'ny fandikana toy izany dia ilaina ny manaraka fitsipika sasany.
Noho izany, mandritra ny firaisana ara-nofo, dia ilaina ny manome loha ireo lohahevitra izay tsy ampidiran'ny penis lalindalina ao amin'ny vagina. Ankoatra izany, mendrika ny tsy hiantehitra amin'ny fanenjehana maharitra sy mahery setra. Tokony hifankatia kokoa amin'ny mpiara-belona aminy ilay mpiara-miasa. Ankoatra izany, mandritra ny fanarenana ny tranonjaza (2-3 volana), tsy ilaina ny manao fitiavana matetika matetika in-droa isan-kerinandro, satria Izany dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fanasitranana ny vatan'ny uterine.
Araka izany, ny valin'ny fanontaniana hoe raha azo atao ny manao firaisana aorian'ny fialana sasatra.
Ny fitsaboana fanosotra mandritra ny fitondrana vohoka - 1 trimester
Azo atao ve ny mikarakara bevohoka bevohoka?
Fanaintainana miverina amin'ny vohoka
Na mety ho an'ny vehivavy bevohoka ve ny vehivavy bevohoka?
Azo atao ve ny manosika ny gazety ho an'ny vehivavy bevohoka?
Ny fiandohan'ny fitondrana vohoka
Inona no dikan'ny hoe "uterus in a tonus"?
Cellulite mandritra ny fitondrana vohoka
Azo atao ve ny miandry ny voankazo bevohoka amin'ny daty farany?
Mifangaro ao amin'ny kibo ambany kokoa mandritra ny fitondrana vohoka
Mahasosotra ny vehivavy bevohoka eo am-bavahady
Symphysitis nandritra ny fitondrana vohoka
Famerenana fitsaboana dizitaly
Fa maninona no tsy bevohoka ny vehivavy mandia ny volon'izy ireo?
Ny fitaratra mitsangana eo amin'ny lampihazo
Sorbents for allergies
Nahoana no ratsy be ny ato anatiko?
Sakafo zokiny miaraka amin'ny legioma
Akanjo hoditra amin'ny tananao
Ahoana no hamaritra raha misy ny fahasimbana?
Aivar amin'ny ririnina - recipe
Ny biography of Lindsay Lohan
Goldfish avy amin'ny zava-mamy
Manadio ny akanjo hoditra any an-trano
Kim Kardashian talohan'ny nanesorana ny fe-potoana tamin'ny vesatry ny zazalahy iray
Monopod ho an'ny Selfie - fomba fampiasana?
Cookie recipe "Minute"
Taurine amin'ny takelaka
Duck miaraka amin'ny paoma sy ravina ao amin'ny lafaoro - fialantsasatra fialantsasatra ho an'ny sakafo matsiro
Ahoana ny fomba hanesorana ny menaka amin'ny menaka?
Veneary amin'ny nify
Inona no alika mety tsara indrindra?
Azo atao ve ny misotro an'i kefir rehefa mianatra?
Sakafo mandritra ny fitondrana vohoka amin'ny herinandro